Ngowe-1921, usomashishini uHarry Herbert Pace wabeka i-Pace Phonograph Corporation kunye neleta yerekhodi, i-Black Swan Records. Njengowomntu wokuqala we-Afrika-waseMelika, inkampani ye-Black Swan yayaziwa ngokuba namandla okuvelisa "iirekhodi zohlobo."
Kwaye ikhampani isigxina isigxina sayo kwisiqulatho ngasinye se-albhamu "IiRekhodi eziNye zoBugcisa - ezinye ziphela kuphela eziDlulayo."
Ukurekhoda okuthandwa ngu-Ethel Waters, uJames P.
Johnson, kunye noGus noBud Aikens.
Ishicilelwe iphephancwadi yokuqala yase-Afrika neyeMelika, i -Moon Illustrated Weekly.
Ukumisela inkampani yokuqala ye-African-American, irekhodi le-Pace Phonograph kunye nokuthengisa iiRekodi ze-Black Swan Records.
Wazalelwa: uJanuwari 6, 1884 eCovington, Ga.
Abazali: uCharles noNancy Francis Pace
Umtshato: Ethelyne Bibb
Ukufa: ngoJulayi 19, 1943 e Chicago
I-Harry Pace kunye nokuzalwa kwamaRekhodi e-Black Swan
Emva kokugqitywa kwiYunivesithi yase-Atlanta, i-Pace yathuthela eMemfis apho yayisebenza khona imisebenzi eyahlukeneyo ebhanki kunye ne-inshorensi. Ngo-1903, i-Pace yaqalisa ishishini lokushicilela kunye nomcebisi wakhe, i- WEB Du Bois . Kwiminyaka emibili, i-duo yabambisana ekunyatheliseni iphephancwadi i -Moon Moon Illustrated Weekly.
Nangona upapasho lwaluhlala ixesha elifutshane, lwaluvumela i-Pace ukuba yintlekele yoshishino.
Ngo-1912, i-Pace yadibana nomculi weWC . Aba babini baqala ukubhala iingoma ndawonye, ​​bathuthele kwiSixeko saseNew York, baqulunqa i-Pace ne-Handy Music Company.
I-Pace ne-Handy yashicilela umrhumo womculo othengiswa kwiinkampani zerekhodi ezimhlophe.
Nangona i-Harlem Renaissance ithatha umlotha, i-Pace yaphefumlelwa ukuba yandise ishishini lakhe. Emva kokuphelisa ukubambisana kwakhe kunye ne-Handy, i-Pace isungula iNkampani ye-Pace iPhonograph kunye ne-Black Swan Record Label ngo-1921.
Le nkampani ibizwa ngokuba ngumenzi we-Elizabeth Taylor Greenfield owayebizwa ngokuba yi "Black Swan".
Umqambi onomdla uWilliam Grant Still wayeqeshwe njengomlawuli womculo wenkampani. UFletcher Henderson waba ngumqhubi womculo wePhonograph kunye nomphathi wokurekhoda. Ukusebenza ngaphandle kwekhaya lePace, iiRekhodi zaseMnyama zaseMerika zadlala indima ebalulekileyo yokwenza i-jazz kunye ne-blues yolwimi oluqhelekileyo. Ukurekhoda nokuthengisa umculo ngokukodwa kubathengi base-Afrika nabamaMerika, i-Black Swan ibhale izinto ezizithandayo zikaMamie Smith, u-Ethel Waters nabanye abaninzi.
Kunyaka walo wokuqala wezoshishino, inkampani yenza i-$ 100,000 eqikelelweyo. Ngomnyaka olandelayo, i-Pace ithenge isakhiwo sokwakha indlu, ukuqeshwa kwabaphathi bezithili zemimandla kwiidolophu kulo lonke elaseUnited States kunye nabalinganiselwa bangama-1 abathengi.
Kungekudala emva koko, i-Pace yajoyina umnikazi wamashishini omhlophe uJohn Fletcher ukuthenga isityalo esicinezelayo kunye nerediyo.
Ukwandiswa kwePace kwaye kwaqala ukuwa kwayo. Njengokuba ezinye iinkcukacha zenkampani zifumanisa ukuba ukuthengwa kwabakwa-Afrika-Amerika kwakunamandla, baqala ukuqasha abaculi base-Afrika nabaMerika.
Ngo- 1923 , i-Pace kwafuneka ivale iingcango ze-Black Swan. Emva kokulahlekelwa kwiinkampani ezinkulu zokurekhoda ezinokurekhoda amanani aphantsi kunye nokufika kwe-omsakazo, i-Black Swan yaphuma ekuthengiseni iirekhodi ezingama-7000 ukuya kwi-3000 imihla ngemihla.
I-Pace yafakwa kwi-bankruptcy, yathengisa isityalo sayo esicacileyo e-Chicago kwaye ekugqibeleni, wathengisa i-Black Swan kwi-Records yeParamount.
Ubomi Emva kweeNkcukacha zeBlack Swan
Nangona i-Pace idumalekile ngokunyuka ngokukhawuleza nokuwa kweeNkcukacha zeMnyama zaseNtshonalanga, akazange avunyelwe ukuba ngumntu oshishino. I-Pace yavula iNkampani ye-Insured Life Life. Ikhampani ye-Pace yaqhubeka yaba enye yamashishini ahloniphekileyo ase-Afrika aseMelika ngasenyakatho yeUnited States.
Ngaphambi kokufa kwakhe ngo-1943, i-Pace yaphumelela kwisikolo somthetho kwaye yayenza njengegosa iminyaka emininzi.
UJefferson Davis: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Indima yabaLawuli kwiiBaroque kunye neeNkcazo zeNkcubeko
I-Metalloids okanye i-Semimetals: Inkcazo, uluhlu lwezinto, kunye neendawo
Indlela yokuxelela ukuba unayo iPobia yezulu